I-Apple ithembisa ukuyeka ukumbiwa komhlaba kwaye ikhuthaze izinto ezisetyenziswayo | Ndisuka mac
I-Apple ithembisa ukuyeka ukumbiwa komhlaba kwaye ikhuthaze izinto ezisetyenzisiweyo
Iplanethi izele yimingxunya. Naphi na apho sijonga khona, ayinamsebenzi nelizwe okanye ibala likarhulumente, umntu ubeka imingxunya iplanethi ekukhangeleni izixhobo yokwenza ngayo iimveliso esizisebenzisayo yonke imihla, Rhoqo, iziphumo ezibi, ngakumbi kwiindawo ezichaphazelekayo zalapha, zingaphezulu kwezibonelelo. Kwaye ngenxa yesi sizathu, iApple igqibe ekubeni ithathe iinzame zayo kukhuselo lokusingqongileyo inyathelo elinye ukuya phambili.
Sonke siyazi ukuba iApple inedumela lokuba yenye yeenkampani ezixhalabileyo malunga nokusingqongileyo kwaye ngoku, njengesiphumo sokupapashwa kweNgxelo yoXanduva lwendalo lwenkampani 2017, iya kuba njalo ngakumbi. U-Apple uzimisele "ukuyeka ukumbiwa komhlaba ngokupheleleyo".
1 UApple uthi 'HAYI' kwimigodi
2 Ukurisayikilisha sisitshixo, kodwa inkqubo ayisiyonto ilula kangako
UApple uthi 'HAYI' kwimigodi
Inkampani yaseCupertino ithathe nje inyathelo elibalulekileyo eliya phambili ngenjongo yokukhusela iplanethi esihlala kuyo kunye nobomi bazo zonke izinto eziphilayo ezihlala kuyo. Imigodi yingxaki enkulu kwindalo esingqongileyo, ngakumbi xa kuziwa kwizinto ezithile ezinokuba yityhefu kwimpilo kwaye zisetyenziswa ekwenziweni kwezixhobo ezininzi ze-elektroniki esizisebenzisa mihla le. Kodwa iingxaki ezivela kwimigodi aziphelelanga kwindalo kuphela, zikwabangela ukungalingani ngokwezoqoqosho nakwezentlalo, nkqu nokufikelela kwiimeko zokuxhatshazwa, ukuqeshwa kwabantwana kunye neemeko ezinokuthi zichazwe njengamakhoboka.
Abantwana abaphethe i-cobalt emgodini kwiDemocratic Republic of Congo | UMFANEKISO: Amnesty International
Konke oku, kwifayile ye- Ingxelo yoXanduva lokusiNgqongileyo ka-2017I-Apple iveza inkolelo yayo eqinileyo yokuba iteknoloji kufuneka ikhuseleke kwabo bayisebenzisayo, ngelixa bevuma, kwakhona, ubunyani bokutshintsha kwemozulu kunye nenyaniso yokuba "Ubutyebi bomhlaba abuyi kuhlala ngonaphakade".
Ukurisayikilisha sisitshixo, kodwa inkqubo ayisiyonto ilula kangako
Isisombululo, inkampani ithi, kukufumana ifomula edibanisa ngempumelelo le miba, yiyo loo nto ivakalise injongo yayo eqinileyo yenza izixhobo zisebenzisa izinto ezinokuphinda zisetyenziswe, ezibandakanya i-aluminium, ithusi, i-tin, kunye ne-tungsten.
Nangona kunjalo, le njongo ine umqobo omkhulu apha endleleni, kwaye iApple ayisazi ukuba zenziwe njani izixhobo ezinekhulu lepesenti yezinto eziphinda zenziwe kwakhona, nangona ibanga ukuba sele isebenza kuyo.
U-Lisa Jackson, usekela-mongameli wezendalo, umgaqo-nkqubo kunye namanyathelo entlalontle, uchazile udliwanondlebe Yintshukumo engaqhelekanga nanjengoko ibalulekile, hayi kuba icinga impembelelo yophuhliso lweshishini kwiinjongo ezithile, kodwa nangenxa yokuba zimbalwa kakhulu, inkampani yenza injongo yoluntu ngaphandle kokuba ngaphambili ifumene indlela oya kuthi ukwazi ukuyiphumeza ngayo.
UJackson ucacisile kudliwanondlebe ukuba, ngeli xesha, sisixa esincinci kuphela sezinto ezingaphakathi kwi-iPhone ezivela kwinto yokurisayikilisha. Okwangoku, injongo yenkampani kukuba ixesha elide lidibanise isinyithi esenziwe ngomgangatho ophezulu esivela kubanikezeli kunye noko kufunyenwe kwiimveliso ze-Apple ezibuyiswa ngabathengi, kwaye ke ngokwakha zonke iintlobo zezixhobo. kulula ukuphelisa ukumbiwa kwemigodi.
Ukuhamba ngabom kwe-Apple ukusuka kwezemigodi ukuya ekusebenziseni izinto eziphinda zisetyenziswe kubaluleke kakhulu kwaye kubaluleke kakhulu. Kwixesha elidlulileyo, inkampani ibifumene ukugxekwa kunye nezikhalazo ezahluka-hlukeneyo ezivela kwimigodi, ezinye zazo zinobuzaza njengaleyo yenzeka kunyaka ophelileyo xa uphando Amnesty International yatsho ukuba Abathengisi bebhetri baka-Apple babesebenzisa i-cobalt emigodini apho ukusetyenziswa kwabantwana kwakuyinyani.
Izityholo zokuxhaphaza ngokungekho mthethweni kwemigodi yeetini nazo zenzekile kwizihlandlo ezahlukeneyo.
Ndiyathemba ukuba iApple izakuqhubela phambili ngamanyathelo aqinileyo kwaye akhawulezileyo kule nto, kwaye nezinye iifemu kwihlabathi liphela zilandela indlela efanayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-Apple ithembisa ukuyeka ukumbiwa komhlaba kwaye ikhuthaze izinto ezisetyenzisiweyo
Ividiyo yakutshanje yeApple Park isibonisa indlela oqhubeka ngayo umsebenzi ebusuku
Iinkonzo ezi-5 ezilungileyo zokuyila incwadana kwiMac yakho